ဆိုင်မွန်(ဗဟုသုတများ): ဂျာမန်﻿ အမျိုးသမီး လက်﻿ထဲက စာအုပ်﻿﻿
ဂျာမန်﻿ အမျိုးသမီး လက်﻿ထဲက စာအုပ်﻿﻿
- တစ်﻿ခါက သီတဂူ ဆရာ﻿တော် ဘုရား﻿ ကြီးသည်﻿ ဗုဒ္ဓဂယာရှိ ﻿ဗောဓိပင်﻿ အနီးသို့ ﻿ရောက်﻿﻿သော အခါ ဂျာမန်﻿ အမျိုးသမီးကြီး တစ်﻿ဦး၏ လက်﻿ထဲတွင် ဓမ္မာစရိယ ဦး﻿ဌေးလှိုင်﻿ ﻿ရေးသည့်﻿ "ရဟန္တာနှင့်﻿ ပုဂ္ဂိုလ်﻿ ထူးများ" စာအုပ်﻿ ကိုင်﻿ထားသည်﻿ကို ﻿တွေ့ရသဖြင့်﻿ စကား﻿ပြော ဖြစ်﻿ခဲ့၏။
* ဒီစာအုပ်﻿ကို ကိုင်﻿ထား﻿တော့ မြန်﻿မာစကား တက်﻿သလား ?
• မတက်﻿ပါဘူးဘုရား၊ နည်းနည်းပါးပါးပဲ ﻿ပြောတက်﻿တာပါ။
* မြန်﻿မာစာ﻿ရော ဖက်﻿တက်﻿သလား ?
• ဗျည်း (၃၃) လုံးနဲ့ သင်﻿ပုန်းကြီး﻿တော့ စသင်﻿﻿နေ ပါပြီ။ မြန်﻿မာစာ တတ်﻿ချင်﻿လွန်းလို့ အခုလည်း သင်﻿﻿နေပါတယ်﻿ ဘုရား။
* မြန်﻿မာစာ တက်﻿﻿တော့﻿ကော ဘာလုပ်﻿မှာလဲ?
• ဒီ﻿တော့- ဂျာမန်﻿ အမျိုးသမီးကြီး က လက်﻿ထဲမှ စာအုပ်﻿ကို ပြပြီး - ဒီလို အဖိုးတန်﻿တဲ့ စာအုပ်﻿﻿တွေကို ဖက်﻿ချင်﻿လို့ပါ ဘုရား - တဲ့။
• အရှင်﻿ဘုရားတို့ တိုင်းပြည်﻿က ရတနာ﻿﻿ကောင်း﻿တွေ ကိန်း﻿အောင်း﻿နေတဲ့ တိုင်းပြည်﻿ပါ ဘုရား။
* ဘာ﻿ကြောင့်﻿ ဒါမျိုး﻿ပြောတာလည်း မိုးကုတ်﻿မြို့ကို ﻿ရောက်﻿ခဲ့လို့လား ?
• မဟုတ်﻿ပါဘူး ဘုရား။ အရှင်﻿ ဘုရားတို့ တိုင်းပြည်﻿က ပရိယတ်﻿လည်း﻿တော်﻿၊ ပဋိပတ်﻿လည်း﻿တော်﻿၊ တရား အကျင့်﻿မှာ ဆိုလည်း မဂ်﻿ဉာဏ်﻿၊ ဖိုဉာဏ်﻿ ﻿ပေါက်﻿ပြီး﻿တော့ တရားကို တကယ်﻿သိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်﻿﻿မြတ်﻿﻿တွေ အများကြီးပဲ ရှိတယ်﻿။ ဒါ့﻿ကြောင့်﻿ မြန်﻿မာပြည်﻿ဟာ﻿ ရတနာ﻿တွေ ကိန်း﻿အောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်﻿လို့ တပည့်﻿﻿တော်﻿က ﻿ပြောချင်﻿ တာပါဘုရား။
--- အင်း - တို့မြန်﻿မာ﻿တွေနဲ့ များ ကွာလိုက်﻿တာ။
နိုင်﻿ငံခြားသား﻿တွေက ကိုယ့်﻿နိုင်﻿ငံက အဖိုးတန် တရားစာတွေကို ဖက်﻿ချင်﻿လွန်းလို့ ဖက်﻿တတ်အောင်﻿ မြန်﻿မာစာ﻿တွေကို ခက်﻿ခက် ﻿ခဲခဲ သင်﻿ယူ﻿နေ ကြရတာ။
- ဒို့ မြန်﻿မာ လူမျိုး﻿တွေက ကိုယ့်﻿မြန်﻿မာစာနဲ့ ﻿ရေးထားတဲ့ တရားစာအုပ်﻿﻿ ကောင်း﻿တွေ အ﻿မြောက်﻿အများ ရှိ﻿နေပါလျက်﻿နဲ့ ဒီစာ﻿တွေ﻿ကို မဖတ်﻿ချင် ﻿ကြဘူး၊ စိတ်﻿ဝင်﻿စားမှု မရှိကြဘူး။ COC တို့၊ KTV တို့၊ ကိုးရီးယား တို့နှင့်﻿ အချိန်﻿﻿တွေကို ဖြုန်းတီး﻿နေ ကြတာ တကယ့်﻿ကို ဝမ်းနည်း စရာပါ။
- တကယ်﻿﻿တော့ ဒီနိုင်﻿ငံမှာ ရှိတဲ့ တရားစာ﻿အုပ်﻿﻿တွေက ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ စာအုပ်﻿﻿တွေထဲမှာ အ﻿ကောင်းဆုံး စာအုပ်﻿﻿တွေပါ။
- ဒီဘဝချမ်းသာ﻿ရေး ထင်﻿မကပါဘူး၊ ﻿နောက်﻿ဘဝ ချမ်းသာ﻿ရေး၊﻿﻿ သံသရာချမ်းသာ﻿ရေး အထိပင်﻿ ﻿ပေးစွမ်းနိုင် ﻿စွမ်းရှိ﻿တဲ့ စာပေ﻿တွေပါ။ ဒီလို တန်﻿ဖိုး အလွန်﻿ကြီးတဲ့ တရား စာ﻿ပေ﻿တွေ ကို﻿တောင် မဖက်﻿ချင်﻿၊﻿ မ﻿လေ့လာ ချင်﻿ဘူး ဆိုရင်﻿﻿တော့ ဒီဘဝမှာ မြန်﻿မာလူ﻿မျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်﻿ရ﻿သော်﻿လည်း အလားကား အချည်းနှီးပါပဲ။ ဘာကြောင့်﻿လည်း ဆို﻿တော့ ﻿လောကရဲ့ တရားစစ်﻿ တရားမှန်﻿ကို သိခွင့်﻿ မရလို့ပါ။
- ဒါ့﻿ကြောင့်﻿ ကမ္ဘာ့ အ﻿ကောင်းဆုံး ဖြစ်﻿တဲ့ ကိုယ့်﻿နိုင်﻿ငံရဲ့ တရား စာ﻿ပေ﻿တွေကို ဖက်﻿ဖြစ်﻿﻿အောင်﻿ ဖက်﻿ကြပါလို့ တိုက်﻿တွန်းနိုး﻿ဆော်﻿ လိုက်﻿ပါတယ် ﻿•••﻿
ရာ ဟု လာ
Originally published at - https://www.facebook.com/linlin.aung.50159?fref=photo
Posted by Te Tee at 12/21/2015 07:47:00 PM